अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिदै, यस्तो छ कारण र तयारी — Sanchar Kendra
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजीनामा दिदै, यस्तो छ कारण र तयारी
काठमाडाैं । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाकाे कार्यकाल सकिदैछ । आगामी फागुन २० गते अर्थमन्त्रीबाट उनले राजिनामा दिनुपर्नेछ । अन्यथा स्वतः अवकाश पाउनेछन् । तर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नै उनलाई डेढ हप्ताका लागि मात्रै सञ्चार मन्त्रालयको जिम्मेवारी थमाएका छन् । निर्वतमान मन्त्री गोकुल बास्कोटाले राजीनामा दिएपछि डा. खतिवडाले आइतबार सञ्चार मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका हुन ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडा राष्ट्रियसभामा दुई वर्ष अघि राष्ट्रपतिबाट मनोनित सांसद हुन् । गोला प्रथाका आधारमा उनको दुई वर्षे कार्यकाल यही फागुन २० गते सकिँदैछ । संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) अनुसार मन्त्री बनेको हुँदा सांसद पद नै नरहेपछि खतिवडाले २० गते नै नैतिकताका आधारमा अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ ।
डा. खतिवडालाई अब फेरि राष्ट्रियसभामै पुनः मनोनित गर्न संविधानले दिँदैन । किनभने, उनले संविधान अनुसार नै गोला प्रथाबाट दुईवर्षे कार्यकाल पाएका हुन् । गोला तानेर संविधान अनुसार बाहिरिएको व्यक्तिलाई अब फेरि ६ वर्षका लागि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउनु संविधानमाथि नै खिल्ली उडाउनु हो । यही कारणले गर्दा डा. खतिवडाले २० गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुको विकल्प देखिँदैन ।
यसअघि समाजवादी पार्टीका रामप्रित पासवानको कार्यकाल पनि गोला प्रथाबाट २ वर्ष कायम भएको थियो । तर उनले माघ ९ गते सम्पन्न राष्ट्रियसभा सदस्यको चुनावमा पुन: उम्मेदवार बनेका थिए । यद्यपि उनी पराजित भए ।
हुन त संविधानको धारा ७८ ले सांसद नरहेको व्यक्तिलाई पनि बढीमा ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न सक्ने ढोका खोलेको छ । तर, डा. खतिवडालाई राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार मन्त्री बनाइसकेको हुँदा सो धारा अनुसार उनको पद २० गते नै सकिने स्पष्ट छ ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडालाई नै आगामी ५ महिनासम्म अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने र उनैले आगामी बजेट ल्याउने चर्चा पनि बालुवाटार निकट सूत्रहरुले बताउँदै आएका छन् । तर, जनताबाट दुई तिहाई बहुमत पाएको दलले जननिर्वाचित प्रतिनिधिलाई अर्थमन्त्री बनाउन नसकेर गैर सांसदमार्फत बजेट ल्याउनु भनेको नेकपामा अर्थमन्त्री बन्ने हैसियतका सांसदहरु नै छैनन् भन्ने सन्देश जानु हो ।
खतिवडाको नियुक्तिमै कानूनी दुष्कृति
त्यसो त अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको सुरुको नियुक्तिमै प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबैले मिलेर संविधानको उल्लंघन गरेको पाइएको छ । तर, प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस कमजोर रहेकाले त्यो कानुनी दुष्कृतिलाई सच्याउन कसैले सकेन ।
आम निर्वाचनअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि तीन जनजाको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरे । देउवाले गोपाल बस्नेत, कृष्ण पौडेल र चाँदनी जोशीको नाम राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेका थिएन । राष्ट्रपतिले ती नाम दराजमा थन्क्याएर राखिन् ।
२०७४ साल फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री बनेपछि सोहीसाता प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रियसभामा मनोनित सदस्यका लागि अरु नै तीनजनाको नाम पठाए । र, ती नामलाई सदर गर्दै फागुन ८ गते राष्ट्रपति कार्यालयले डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र बिमला पौड्याललाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनित गरिएको सूचना प्रकाशित गर्‍यो ।
संवैधानिक राष्ट्रपतिले पहिलो क्याबिनेटबाट पठाइएको नामलाई रोकेर राख्न नमिल्ने भन्दै देउवाका पालामा सिफारिस भएका बस्नेत, पौडेल र जोशीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । उनीहरुले खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई सांसदको सपथ नखुवाउन अन्तरिम आदेशको माग गरे । फागुन १३ गते सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दै खतिवडा, बिडारी र पौडेललाई तत्काल सपथ नखुवाउनु र २० गते छलफलका लागि आउनु भन्यो ।
तर, दुई तिहाई बहुमतको दम्भमा रहेको ओली सरकारले सांसदको सपथ नै नखाएका खतिवडालाई फागुन १४ गते अर्थमन्त्री बनाए । अनि सांसदको सपथ नै नगरेका व्यक्तिलाई राष्ट्रपति कार्यालयले संविधानको धारा ७६ (९) अनुसार मन्त्री बनाइएको विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । यसरी सांसदको सपथ नै नखाइकन डा. खतिवडा ‘सांसदको हैसियत’मा धारा ७६ अनुसार अर्थमन्त्री बने ।
आफ्नै कारणले संकटमा फस्यो ओली सरकार
आफ्नो ६९ औं जन्मोत्सव मनाइरहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेतृत्व गरेको सरकार एकपछि अर्को संकटमा फस्न थालेको छ । यी संकट आन्तरिक र बाह्य दुबै किसिमका छन् । मंगलबार दिउँसो १ बजे प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दैछ, जुन बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सञ्चारमन्त्रीको अडियो प्रकरणबारे जवाफ दिनुपर्नेछ, अन्यथा संसदै चल्न नदिने विपक्षी नेपाली कांग्रेसले माग राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पार्टीभित्र अल्पमतमा परे पनि सजिलै पछि हड्ने खालका नेता होइनन् । प्रधानमन्त्री कतिसम्म दृढ अठोटमा छन् भन्ने बुझ्नाका लागि उनले गत फागुन ४ गते आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र झापाको दमकमा पुगेर दमक-चिसापानी सडकको शिलान्यास कार्यक्रममा बोलेका कुराहरु उनकै शब्दमा –
”सरकारले स्थिरता, स्थायित्व, शान्ति, सुशासन र विकासको जुन लहर सिर्जना गरेको छ, त्यसका विरुद्ध देशी विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्वहरु र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरु लागेका छन् । हामीले राजतन्त्रका विरुद्ध संघर्ष गर्‍यौं । अहिले पनि निरन्तर संघर्ष गरिरहनुपरेको छ । जो देश विकास भएको देख्न चाहँदैनन् । यस्ता शक्तिहरुले रोक्न खोज्छन् । तपाईहरुलाई लाग्ला बहुमत छ । बहुमत भए पनि फर्की फर्किकन, फर्की फर्किकन फेरि उनीहरु यो सरकारलाई असफल पार्ने, यसलाई ढाल्ने यसलाई बदनाम गर्ने, यी प्रयत्नमा कसरी लागिरहेका छन्, तपाईहरुले देखिरहनुभएको छ ।
तर, म भन्न चाहन्छु, अरु कसैले होइन, अरु कुनै शक्तिले होइन, हामीलाई सरकारमा पुर्‍याइदिएको तपाईहरुले हो । जबसम्म तपाईहरुको आशिर्वाद रहन्छ, सरकारलाई कसैले हल्लाउन पनि सक्दैन । हामी अगाडि बढ्यौं बढ्यौं । ०६४ सालमा मैले किड्नी बदलेको थिएँ । त्यसबेला नेपालमा ठूलो आश्चार्य भयो । मैले यस क्षेत्रमा चुनाव हारें । ठूलो आश्चार्य भयो ।
मेरो जिन्दगी रोगसँग लडेर, प्रतिक्रियावादी शक्तिहरुसँग लडेर, जनविरोधी शक्तिहरुसँग लडेर यत्तिकै बित्या छ । त्यसकारण बिमारी भएँ भनेर रोगसँग लड्न पनि मलाई अनौठो लाग्दैन, अप्ठ्यारो स्थिति गरे भने प्रतिक्रियावादीसँग लड्न पनि मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन । मेरो जिन्दगी लडाइँमा बित्या छ । त्यसकारण म लडाइँको मैदानमा खडा छु सधैं । अखडामा । ४६ वर्ष भो बिमारीका बिमारी लडेको ।
विरोधीहरु मुकाबिला गर्न सक्दैनन्, मनलाग्दी भनेर आश गर्छन् । मर्न त मर्छ एकदिन, तर अलि पछि । अस्ति झण्डै गा’को डाक्टरसापले चिरफार गरेर फेरि ठाकठीक ।
मेरो पेट चारपल्ट राम्रैसँग चिर्‍या छ । केही अंग फालिया छन्, केही अंग काटिया छन् । केही अंग फेरिया छन् । मेरो बानी पर्‍या छ, शरीरभित्र तार, यन्त्र-सन्त्र राखेर चल्नुपर्‍यो भने पनि चल्ने । यो बानी पर्‍या छ । रेडियोको बेट्रीजस्तो ।
म किन यसरी बाँचिरहेको छु, काम गर्न सकिरहेको छु भन्दा नेपाली जनताको स्नेह, माया, ममता, तपाईहरुको शुभकामना । र, यस देशलाई भ्रष्टाचार नगरेर, भ्रष्टाचार रोक्दै देशलाई विकासको बाटोमा अगाडि बढाउन । त्यसका निम्ति म बाँचिराख्या छु । तपाईहरुले घर गएर सबैलाई मेरो नमस्कार सुनाइदिनोस् । मैले सबैलाई सम्झेको छु । सम्झेको मात्रै होइन, तपाईहरुलाई शीरमा राखेर इमानका साथ, बिमारी हुँदा पनि बिमारी छु नभनिकन रातदिन काम गरेको छु । फेरि पनि गर्नेछु ।” बास्कोटा काण्ड बाहिरिएपछि अहिले चौतर्फी ओलीको राजिनामा मागिएको छ । ओली भने राजिनामा दिने सुरमा छैनन् ।